यो पनि पढाैं यसरी बनेथ्यो सिंहदरबार
मेरो आत्माले त्यो कुरा मान्दै मानेन। मैले राजासामु ज्यादै विनम्रतापूर्वक भनेँ, "म प्रधानमन्त्री छु। मेरो जिम्मामा भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी भयो। अब एक मिनेट पनि यस पदमा बस्न मेरो मनले दिएन।" राजासँग विवाद नै पर्‍यो। मैले एकोहोरो जिद्दी गरेरै राजीनामा दिएँ। मेरो राजीनामालगत्तै नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत एलपी सिंहले बालुवाटारमै आएर मलाई भनेका थिए, "त्यति नै घटनाका आधारमा तपाईंले किन राजीनामा दिनुभयो ? राजीनामा नै दिनुपर्ने त जरुरी थिएन।" मैले यसको जवाफ फर्काउनु उचित ठानिनँ। मात्र यति सोधेँ, "एउटा सामान्य रेलवे दुर्घटना हुँदा लालबहादुर शास्त्रीले किन प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए ? मलाई यसको जवाफ दिनूस् त ?" उनी नाजवाफ भए ।
सिंहदरबारमा आगलागी हुँदाका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँग नेपाल साप्ताहिकका लागि ईश्वरी ज्ञवालीले तयार पारेको सामाग्रीबाट जुन २०७० फाल्गुन ४ गते भएको थियो ।